Home Wararka Ciidamada Booliska Garowe oo gacanta ku dhigay maandooriye
Ciidamada Booliska Garowe oo gacanta ku dhigay maandooriye
Ciidamada Booliska gobolka Nugaal oo ku guda jira howl galadii bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa qabtay 24 duub oo ah maandooriyaha Xashiishka, gaarigii waday Iyo dadkii Ka ganacsanayay.
Ciidamadda Booliska oo helay xogta gaarigan ayaa xili uu marayay aaga xaafada Jillab ee Garowe gacanta ku dhigay gaarigan iyo Nimanki waday intaba.
Taliyaha qaybta Booliska Gobolka Nugaal G/Sare Xussen Cali Maxamuud oo ka hadlay madashii lagu soo bandhigayay ayaa u mahadceliyay ciidamadii howlgalkan fuliyay iyo bulshadii xog bixiyaasha ahaa intaba.
Taliyaha qaybta Booliska Nugaal G/Sare Xussen Cali ayaa dhanka kale bulshada ugu baaqay inay ciidamada amaanka la shaqeyaan ciidamadana si wanagsan ula dhaqmaan madama ciidanka Booliiska uu yahay u adeegaha shacabka.
Taliye Xussen Cali Maxamuud ayaa sido kale ciidamada booliska ugu baaqay inay bulshada u naxariistaan madama lagu Jiro bishii barakeysned ee Ramadaan.
Previous articleAbaaraha ku dhuftay Geeska Afrika oo saameeysay Malaayiin Soomaali ah
Next articleBoqor Buurmadow “warka ka soo yeeray Rooble waa ku digasho iyo aflagaado”
Mid ka mid ah shaqaallaha Q.M oo gaalkacyo lagu dilay (Faah-faahin)